Amasayithi WaseSweden Ase-inthanethi | Amakhasino e-inthanethi Amakhasino e-inthanethi
(276 amavoti, isilinganiso: 5.00 out of 5)
Iyalayisha ... Kusukela ngoJanuwari 2018 zonke izinhlobo zokugembula zisemthethweni eSweden. Ukuzimela yedwa kulo mkhakha kungokwaseSvenska Spel kahulumeni, eyasungulwa ngo-1997 ngokuhlanganiswa kwezinkampani ezimbili: iPenninglotteriet neTipstjänst. ISvenska Spel isebenza ngamakhasino asemhlabeni ezweni, kanye nomkhakha wamalotho. Ngokomthetho wokugembula eSweden ekhasino ungadlala imidlalo efana ne-roulette, ama-craps nemidlalo yamakhadi, imishini ye-slot, i-poker. Ilungelo elikhethekile lokunikeza yonke le midlalo nge-Svenska Spel. Ngokomthetho, ukuphepha nokwethembeka kwemakethe yokugembula yaseSweden ukuphatha ukuphatha ukugembula eSweden.
Ukugembula ku-inthanethi eSweden
Kuze kube manje, ukugembula online eSweden akulawulwa. Umbuso ophethwe nguhulumeni uSvenska Spel unelungelo lokunikeza i-poker online kanye nebhingo eku-inthanethi. Kodwa-ke, ochwepheshe bezokugembula bamemezele izinguquko ezingaba khona emthethweni okhona ngokugembula okuku-inthanethi eSweden, okuzovumela ukwethula uhlelo lwamalayisense ezinye izinhlobo zokugembula online.
Uhlu lwezindawo ze-10 eziphezulu ze-Swedish Online ze-Casino
Uhambo lwethu namuhla yizwe elicebile ngomlando, induduzo nokuhleleka - eSweden. AmaCasinoToplists anikezela ukubona izinto, izici namasiko aleli zwe elihle. Futhi-ke, funda okuningi ngamakhasino nokugembula.
ISweden - indawo kanye nomlando impela;
eyakhiwe ikakhulukazi emadolobheni amakhulu afana neSundsvall), iMalmö, Gothenburg ne-Stockholm, inhloko-dolobha yezwe;
Iminyaka engu-20 + yokugqoka.
Amasayithi amahlanu eStockholm Sweden ane amakheli enhloko-dolobha;
Amaqiniso anentshisekelo ngeSweden nenani labantu.
Indawo yaseSweden kanye nomlando omncane
ISweden itholakala eNyakatho Yurophu ezingxenyeni ezisempumalanga naseningizimu yeScandinavia. Ngasentshonalanga imingcele isondele eNorway, nasenyakatho-mpumalanga - neFinland. Ukusuka eDenmark ukuhlukanisa iStraits Öresund, Kattegat neSkagerrak.
Ukuchuma kwalo izwe elikutholile ngekhulu le-17, kepha alikwazanga ukugcina isikhundla salo esiholayo ngenxa yempi yasenyakatho neRussia. Ngo-1809, iSweden ilahlekelwe ezinye izindawo zayo ezisempumalanga, futhi yalahlekelwa umthelela wayo eFinland eyakhelene nayo. ISweden ibilokhu ingasohlangothini lweJalimane futhi kuwo wonke umlando isize uhulumeni kaningi, kufaka phakathi nesikhathi seMpi Yesibili Yomhlaba.
I-casino nokugembula eSweden
AbaseSweden bangabantu abasebenzayo futhi ngizama ukuthola zonke izinzuzo, noma ngabe kungokuphinda kusetshenziswe udoti noma imali engenayo ngokugembula. Ezweni ungadlala ukuzijabulisa, kodwa ngaphansi kokulawulwa okuqinile nguhulumeni. Ngakho-ke ngo-1999, sekwakhiwe amakhasino amane emadolobheni amakhulu kunawo onke ezweni: Sundsvall (esakhiwe esakhiweni sesiteshi) , I-Malmö , I-Gothenburg futhi enhloko-dolobha, Stockholm. Le yikhasino enkulu kunazo zonke yezwe «Casino Cosmopol Stockholm». Ivulelwe kamuva nje - ngoMashi 2003 futhi ungayithola kukheli leKungsgatan 65. Lapha uzokwazi ukudlala eRoulette, kanye naseBlackjack, eCaribbean Stud naseBaccarat. Imiqhudelwano ye-poker yekhasino ibanjwa ngezikhathi ezithile. Ku-poker ungadlala kokubili okurekhodwe ngaphambilini ocingweni, bese ujoyina ngosuku lwemidlalo. Izivakashi kulindeleke nsuku zonke kusuka ngo-13.00 kuye ku-5.00 ekuseni.
Ikhasino linemikhawulo yalo: kufanele ube neminyaka engama-20 noma ngaphezulu (uzohlola ipasipoti yakho emnyango) futhi iyunifomu kufanele ihambisane nomqondo wokuthi «smart-casual» (smart casual). Uyacelwa ukuthi uqaphele ukuthi i-euro ngokuvamile ayisetshenziswa eSweden, lapho kusebenza imali yayo - i-krona yaseSweden.
- I-Vasa Museum . Ikheli Lomnyuziyamu: Galärvarvsvägen, 14. Lesi yisigcinamagugu esingajwayelekile, nomkhumbi olondolozwe kusukela ngekhulu le-17. Ngendlela, ukuphela kwakhe emhlabeni. Ama-95% ayo yonke imiklamo eqoshiwe nezithombe ezibaziwe agcinwe ngendlela yawo yangempela. Manje umkhumbi usemnyuziyamu owakhelwe injongo, lapho ungabuka khona ifilimu ekhuluma ngalo mbukiso (ngezilimi eziyi-16).
- I-Alfred Nobel Museum . Ikheli: Börshuset, Stortorget, Gamla stan. Lapha, izithombe zabaphumelele imiklomelo engu-800 azigcini nje ngokuhlobisa izindonga, futhi zihamba nohlobo lomshini ekuhlanzeni okomile. Lo mklamo othakazelisa kakhulu awusizi kuphela ukonga isikhala emnyuziyamu. Kepha kuyaphinda kuyakhumbula ukuthi umnyuziyamu unikezelwe ekufezeni isayensi. Kukhona nezinsiza ezisebenzisanayo lapho abantu abadala abanezingane bengaphinda okunye okutholakele kwakhe okuvelele.
- “ISkansen” Museum. Ikheli: I-Djurgardsslatten 49-51. Vakashela lonke elaseSweden amahora ambalwa emoyeni omusha? Kalula! Futhi konke lokhu kubonga kumnyuziyamu wesiko laseSweden "iSkansen". Nayi indlu nefa lama-18-19 eminyaka. Ensimini yezindawo zokuhlala zemyuziyamu izingcweti zimatasa ngemisebenzi yazo yansuku zonke, futhi ungabuka ukuthi abenzi bezicathulo, ababhaki kanye nalabo abashaya ingilazi.
- Umnyuziyamu wase "Junibacken". Indawo: isiqhingi saseDjurgarden eStockholm. Yimnyuziyamu yezinganekwane ezidumile zika-Astrid Lindgren nepharadesi lezingane nabo bonke abalandeli bomsebenzi wakhe.
Amaqiniso anentshisekelo ngeSweden namaSweden
E-Sweden kunabantu abangaphezu kuka-300,000 abaneziqongo uCarlson / Karlsson;
ISIKHATHI sabafundi beminyaka yobudala kuleli - iminyaka engama-26;
Izintela eziphakeme kakhulu - i-22% yenzuzo;
ESweden kune- “Ice Hotel» - «ICEHOTEL». I-200 km enyakatho ye-Arctic Circle edolobhaneni laseJukkasjarvi iyi "ice eqhugwaneni" langempela. Wakha kabusha minyaka yonke, ngoba ukuphela kwentwasahlobo kusuka emifudlaneni kuhlala kutholakala. Lapha ungaba ngumnikazi wokuqopha isithombe esenziwe ngeqhwa, uye ekudobeni amaqhwa, futhi ube ngufakazi kuma-aurora borealis;
"Snus" - ugwayi othambile, oceciwe. IsiSwidi ibekwe ngaphansi komlomo ongaphezulu futhi isetshenziswe esikhundleni sogwayi abavamile;
Isitsha esithandwa kakhulu yi-kebab pizza (inyama, ushizi, inhlama kanye nesosi ekhethekile yama-kebabs). Imvamisa, ikhaya lomndeni esikhundleni sedina, lithanda ukuvakashela amathilomu aseduze noma uchungechunge lokudla okusheshayo;
AmaSweden centenarians - isikhathi sokuphila lapha sesineminyaka engaphezu kwengama-80 (enye yezinkomba ezihamba phambili kulo lonke elaseYurophu);
AbaseSweden bacabanga kakhulu ngemithombo yezwe lakhe futhi basebenzisa amandla ngokuhlakanipha. Isibonelo, edolobheni laseBorås ugesi ovela endaweni okushiswa kuyo izidumbu usetshenziselwa ukufudumeza idolobha (izindlu ezingama-60,000, u-10% wamandla adingekayo). Umshini wokuwasha awukho nhlobo - lapha kusetshenziswe igumbi elihlanganyelwayo lokuwasha.
Sweden ebalazweni laseYurophu
0.1 Ukugembula ku-inthanethi eSweden
0.2 Uhlu lwezindawo ze-10 eziphezulu ze-Swedish Online ze-Casino
3 Ukugembula eSweden
3.0.1 Indawo yaseSweden kanye nomlando omncane
3.1 I-casino nokugembula eSweden
3.1.1 I-Stockholm ezikhangayo
3.1.2 Amaqiniso anentshisekelo ngeSweden namaSweden
3.1.3 Sweden ebalazweni laseYurophu
awekho amakhodi wediphozithi wempahla eyigugu